အာဏာ သယံဇာတ အခွန်အခ ခွဲဝေရေး အရေးကြီးအဆို တင်သွင်း၊ အတည်ပြု | ETHNICS VOICE ' : ''; var month = [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]; var month2 = ["Jan","Feb","Mar","Apr","May","Jun","Jul","Aug","Sep","Oct","Nov","Dec"]; var day = postdate.split("-").substring(0,2); var m = postdate.split("-"); var y = postdate.split("-"); for(var u2=0;u2'+posttitle+''; document.write(trtd); j++; } document.write('
အာဏာ သယံဇာတ အခွန်အခ ခွဲဝေရေး အရေးကြီးအဆို တင်သွင်း၊ အတည်ပြု
ASIA NEWS . Burma . Burmese Army . Ethnic . Parliament . VIDEO
အာဏာခွဲဝေခြင်း သယံဇာတခွဲဝေခြင်း အခွန်အခခွဲဝေခြင်းတို့ ပီပီပြင်ပြင် ပေါ်ပေါက်လာရေးအတွက် လိုအပ်တဲ့ ဥပဒေ နည်းဥပဒေများ ပြင်ဆင် ပြဌာန်းပေးနိုင်ရေး ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နဲ့ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ကို တိုက်တွန်းကြောင်း အရေးကြီးအဆိုကို ဗိုလ်မှူချုပ်တင်ဆန်းက ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်တွင်တင်သွင်းခဲ့ပြီး ယင်းက အတည်ပြု မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပါတယ်။ ဦးမြတ်သူရသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။ DVB TV - 20.03.2015